Home Wararka Qooyska Idaacada Wareegto oo Dowladda ka codsatay in loosoo daayo wiilkooda
Qooyska Idaacada Wareegto oo Dowladda ka codsatay in loosoo daayo wiilkooda
Hooyo Binti Afrax oo ah Hooyada dhashay Maxamed Nuur Maxamed oo loo yaqaanno Idaacadda Wareegto ayaa ugu baaqday Dowladda Federaalka Soomaaliya in loo soo daayo wiilkeeda.
Waxaana Hooyadaan ay sheegtay in Idaacadda Wareegto uu ahaa kan kaliya ee u dhaq dhaqaaqi jiray Nolosha qoyskooda sidaas daraadeed ay Madaxda sare ee dowladda Federaalka Soomaaliya wiilkeeda xurnimadiisa u soo celiyaan.
Maxamed Nuur Maxamed Idaacadda Wareegto ayaa horay Xabsiga loogu taxaabay kadib markii lagu eedeeyay isaga iyo 2 Nin kale in ay gacansaar lalahaayeen Al Shabaab una qaabilsanaayeen faafinta Warqadaha digniinada Al Shabaab.
Bishii September,28,2017,ayay ahayd markii Wasaaradda Amniga Xukuumadda Muqdisho ku soo bandhigay Maxamed Nuur oo ku magac dheer “Idaacadda Wareegta”,ka dib markii lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Waxyaabaha lagu eedeeyay Idaacada Wareegta waxaa ka mid ah inuu magaalada Ku daadin jiray waraaqado la sheegay iney Al-Shabaab digniino ku soo saari jireen,kuwaasi oo lagu daabici jiray Madbacadda INNAA FATAX oo ku taalo Muqdisho,waxaana lala xiray dhalinyaro kale oo Madbacadaasi ka shaqeynayay.
Previous articleFaahfaahino kasoo baxay Guddoomiye degmo oo u ku dhaawacmay Qarax Miino..
Next articleWasiir Islow wuxuu horey uu u sheegay inuu iscasilo doono hadii caasimada amaan noqonweyso
Duqa Muqdisho oo qaabilay Wafdi ka socda UNHCR
Baarlamaanka Puntland oo magacaabay guddiga doorashada Guddoomiyaha Cusub kadib xil kaqaadistii...